ဂျပန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင် ကြီးမားသော ရွှံ့ညွန်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားရာ လူ ၂ ဦးသေဆုံးပြီး ၂၀ ခန့် ပျောက်ဆုံးနေ - Xinhua News Agency
ဂျပန်နိုင်ငံ၌ ဇူလိုင် ၂ ရက်က ဖြစ်ပွားသော ရွှံ့နွံပြိုကျမှုအတွင်း အပျက်အစီးပုံအားတွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ-အင်တာနက်)
တိုကျို ၊ ဇူလိုင် ၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဂျပန်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတွင် စနေနေ့က မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ကြီးမားသော ရွှံ့ညွန်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် လူ ၂ ဦးသေဆုံးပြီး အခြား ၂၀ ခန့် ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိကြောင်း ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ဆိုသည်။ဂျပန်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ပိုင်း ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတစ်လျှောက်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ယင်းသဘာဝဘေးသည် တိုကျိုမြို့ အနောက်တောင်ပိုင်း Shizuoka စီရင်စု Atami မြို့၌ စနေနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ရွှံ့ညွန်ပြိုကျမှုသည် ကမ်းခြေအထိ ရိုက်ခတ်ရောက်ရှိသွားကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ နှစ်ဦးကိုသာ ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း စီရင်စု အစိုးရက ဆိုသည်။
ကမ်းခြေ အပန်းဖြေမြို့အဖြစ် ထင်ရှားသည့် Atami မြို့ရှိ အိမ်ထောင်စု၂၁,၀၀၀ ခန့်ကို ၎င်းတို့၏ လုံခြုံရေးအတွက် ဘေးလွတ်ရာသို့ အလျင်အမြန်ပြောင်းရွှေ့ရန် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုလည်း အမြင့်ဆုံးတပ်လှန့်ထားကြောင်း သိရသည်။ ယင်းရွှံ့ညွန်ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်တွင် မိသားစုဝင်ပေါင်း ၃၀၀ အထိ သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းလည်း ဒေသဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။
ကယ်ဆယ်ရေးသမားများက ရွှံ့ညွန်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားသော ဒေသအတွင်း ရှိ ဘေးသင့်သူများအား ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့နေအိမ်များတွင် အသီးသီးပိတ်မိနေသူများ၏ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ၁၀ ကြိမ်ခန့်လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း ကယ်ဆယ်ရေးသမားများက ဆိုသည်။
Shizuoka စီရင်စု အစိုးရက သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွင် ပါဝင်ကူညီရန်အတွက် ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်အစောင့်တပ်ဖွဲ့အား ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြောင်း နှင့် ယင်းတောင်းဆိုမှုအရ ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်အစောင့်တပ်ဖွဲ့က အခင်းနေရာသို့ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၃၀ခန့် စေလွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ယိုရှီဟိုင်ဒီဆူဂါ က အဆိုပါ ရွှံ့ညွန်ပြိုကျမှုနှင့် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပွားသော အခြား ဘေးအန္တရာယ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဂျပန်ဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Yasufumi Tanahashi နှင့်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဝန်ကြီးချုပ် ဆူဂါက ယင်းနေ့ညနေပိုင်းတွင် ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများနှင့်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထိခိုက်ပျက်စီးမှုပမာဏကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားရေး နှင့် ဘေးသင့်ပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုဘေးကင်းအောင်နေထိုင်ရန် နှင့် ၎င်းတို့အတွက် လိုအပ်သော ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်များကို အသင့်လုပ်ဆောင်သွားရန် ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အခင်းဖြစ်စဉ် သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရအနေဖြင့် ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှနေ၍ အလုပ်အဖွဲ့တစ်ခုကိုလည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံမိုးဇလဌာနက ယင်းရွှံ့ညွန်ပြိုကျမှု ၊ ရေကြီးမှု နှင့် မြစ်ရေလျှံမှု ဖြစ်စဉ်များအပေါ် ပြည်သူများအနေဖြင့် အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြရန် နှင့် အမြင့်ဆုံးတပ်လှန့်မှုပြုလုပ်ထားကြောင်း သိရသည်။
စနေနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီမှ စတင်ကာ နောက် ၇၂ နာရီအတွင်း Kanagawa စီရင်စု Hakoneမြို့တွင် မိုးရေချိန် ၇၉၀ မီလီမီတာအထိရွာသွန်းနိုင်ပြီး Shizuoka စီရင်စု Gotemba မြို့တွင် မိုးရေချိန် ၅၅၀ မီလီမီတာဖြင့် အမြင့်ဆုံးစံချိန်ထိ ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း မိုးဇလဌာနက ဆိုသည်။
တိုကျိုမြို့တောင်ပိုင်း Kanagawa စီရင်စု Hiratsukaတွင် မြစ်ရေမြင့်တက်လာမှုကြောင့် ဒေသခံများအား မိမိတို့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ဘေးလွတ်ရာသို့ အလျင်အမြန်ပြောင်းရွှေ့ရန် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်းများက အကြံပြုထားပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဥပဒေဆိုင်ရာ အခြေခံတုံ့ပြန်ရေးအကြံပြုမှုအောက်တွင် နိုင်ငံအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် အမြင့်ဆုံးအဆင့်တပ်လှန့်မိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် တိုကျိုမြို့အရှေ့ပိုင်း Ibarak တစ်လျှောက်ရှိ စီရင်စု အစိုးများအနေဖြင့် ရွှံ့ညွန်ပြိုကျမှုနှင့်ဆက်စပ်သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရသည်။
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များလည်း ရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။ တိုကျိုမြို့နှင့်အိုဆာကာမြို့အကြားပြေးဆွဲနေသည့် Shinkansen ကျည်ဆံရထားခရီးစဉ်ကိုလည်း ယာယီဆိုင်းငံ့ထားရကြောင်း ဂျပန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ရထားပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ယင်းရာသီမိုးသည် ယခုရက်သတ္တပတ်အကုန်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်သို့ ရွေ့လျားထွက်ခွာသွားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ (Xinhua)
Roundup:2dead, 20 missing in massive mudslide in central Japan
TOKYO, July3(Xinhua) — Two people were dead and about 20 others remained missing on Saturday followingamassive mudslide triggered by torrential rain in central Japan, local authorities said.
The disaster occurred at about 10:30 a.m. local time in Atami city in Shizuoka prefecture southwest of Tokyo, as heavy rainfall swept areas along the Pacific coast in central and eastern Japan.
The authorities said the mudslide has reached the nearby coast. The two with no vital signs were discovered by the coast guard ataport, the prefectural government said.
Around 21,000 households in Atami,acity known for hot spa resorts, were ordered to ensure their safety immediately as the local government issued the highest level of evacuation alert. Up to 300 households were affected by the mudslide, according to local officials.
Rescue workers are conductingasearch operation in the mudslide-stricken area for victims. They have received about 10 calls from people who are trapped in their houses.
The Shizuoka prefectural government has called for help from the Self-Defense Forces in disaster relief, and the Ground Self-Defense Force dispatched around 30 personnel to the area in response to the request.
Japanese Prime Minister Yoshihide Suga has held talks with disaster minister Yasufumi Tanahashi over the mudslide and other calamities associated with the rain.
Suga called on an emergency meeting with members of his cabinet in the evening, ordering them to work with local authorities to investigate the scale of the damage and calling on the public to be ready to evacuate when necessary and take action to protect themselves.
The government has set upatask force at the prime minister’s office to collect information.
In the 72-hour period through 11:00 a.m. Saturday local time, 790 mm rainfall was logged in Hakone, Kanagawa Prefecture, and over 550 mm rain was recorded in Gotemba, Shizuoka Prefecture, the agency said.
Due to rising rivers in Hiratsuka, Kanagawa Prefecture, south of Tokyo, the local government advised residents to ensure their safety immediately, issuing the highest level of evacuation alert under the revised basic counter disaster law for the first time in the country.
Prefectural governments along the way from Ibaraki in the east to Kyoto in the west have issued warnings over sediment-related disasters.
Torrential rain also disrupted the public transport system. Shinkansen bullet trains were temporarily halted in sections between Tokyo and Shin-Osaka, according to operator Central Japan Railway Co.
The seasonal rain front is expected to move toward the Sea of Japan coast over the weekend. Enditem
Photo taken on July 3, 2021 shows aboutakilometer away fromamudslide accident site in Atami city, Shizuoka prefecture, Japan.
ဂျပန်နိုင်ငံ နေရာအမြောက်အမြားတွင် ယာယီ ကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာများ တည်ဆောက်နေရ